နိဒါန်း | ပဲ့ချိတ်လှေမော်တော်ပြုပြင်ခြင်း
ငါချစ်ဖွယ်တောင်ပိုင်း Indiana ပြည်နယ်၌ငါ့အဖိုးနဲ့အတူငါးမျှားသည့် 1960 ရဲ့အသုံးစရိတ်နွေရာသီအတွက်တက်ကြီးထွားလာသတိရပါ။ တစ်ကီကျောက်မီးသွေးမိုင်းလုပ်သားကြီးနှင့်နောက်ဆုံးတွင်စက်ရုံအလုပ်သမားနည်းစနစ်ပါရမီအဖြစ်အများအပြားကရှုမြင်ခဲ့သည်အဖြစ် Chrysler Motor Corporation ကနေအငြိမ်းစားယူတဲ့သူကငါ့အဘိုး။ ထို့အပြင်သူသည်အစဉ်အမြဲငါတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကြပါပြီအကောင်းဆုံးကိုယင်ကောင်-ငါးဖမ်းသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြှနျတေျာ့အဘိုးယင်ကောင်ထားခြင်းနှင့်နွေရာသီကာလအတွင်းအများဆုံးရက်ဆောင်းရာသီနှင့်ငါးဖမ်း၌သူ၏လှေမော်တာအပါအဝင်ကသူ၏ငါးဖမ်းကိရိယာများ, ထိန်းသိမ်းသည်သူ၏အငြိမ်းစားပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏အဖိုးနွေရာသီကာလအတွင်းကသူ၏တစ်ခုတည်းသောကားကိုကားဂိုဒေါင်ထဲမှာသေးငယ်တဲ့အင်ဂျင်ပြင်၏။ လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ lawnmowers fixed ရပတ်လည်ကနေရောက်လာတယ်။ ငါအကယ်စင်စစ်ထိုသူသည်မိမိကြိုးစားအားထုတ်ဘို့သိပ်ပိုက်ဆံကောက်ခံခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအများအားဖြင့် Tinker ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာထဲကဒီလုပ်ခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ ငါသည်နံနက်အချိန်၌စဉ်အတွင်းသူ့ကိုကူညီခြင်းနှင့်အစောပိုင်းနေ့လည်ခင်း lawnmowers အလုပ်လုပ်, မြက်ပင်ဖြတ်တောက်, ဥယျာဉ်ထိန်း, ဒါမှမဟုတ်တခြားဘာပဲသူနေ့လည်ငါးဖမ်းသွားကြဖို့အခမဲ့ဖြစ်နိုင်အောင်ပြုသောအမှုခံရဖို့လိုအပ်သတိရပါ။ အငြိမ်းစားအပေါ်သို့, ငါ၏အဖိုးတစ်ဦး 16-ခြေလျင်လူမီနီယံ johnboat နှင့် Stripper တွင်းမှ ယူ. ဘဏ်တွေတလျှောက်ငါးဖမ်းပျံသန်းသွားကြဖို့စုံလင်ခြင်းရှိ၏ထားတဲ့အမှတ်တံဆိပ်အသစ်က Evinrude3မြင်းကောင်ရေ Lightwin မော်တာဝယ်ယူခဲ့သည်။ စက်လှေများနှင့်မော်တာငါ၏အစောဆုံးအမှတ်ရစရာဒီရက်ကနေဖြစ်ကြသည်။ အစဉ်မပြတ်ငါကသူ၏မော်တာစတင်ရန်ခဲ့ကြသည်နှင့်မည်သို့ကောင်းစွာတို့သည်ပြေးကြပုံကိုလွယ်ကူပါတယ်အံ့သြလေ၏။ ထို့အပြင်သူသည်ပထမဦးဆုံးဆွဲအပေါ်အခါတိုင်းစတင်ခဲ့ပြီးနှင့်အစဉ်အမြဲငါကိုအသုံးပြုကအကောင်းဆုံးရိတ်စက်ခဲ့တဲ့မြက်ခင်း Boy တွန်းအားပေးရိတ်စက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်မိမိအ Evinrude လှေမော်တာများနှင့်မြက်ခင်း Boy ရိတ်စက်မော်တာနှစ်ခုလုံးအတူတူပဲ့ချိတ်အဏ္ဏဝါ Corporation ကလုပ်နှင့်နှစ်ဦးစလုံးများစွာကိုလဲလှယ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူနှစ်ခုသံသရာမော်တာကြ၏သဘောပေါက်။
အကြှနျုပျ၏အဖိုးတစ်ဦးပါရမီသူဖြစ်၏။ သူဟာချမ်းသာတဲ့လူကိုမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်သူကကောင်းကောင်းနှင့်သူ၏အခွက်နှင့်အတူရတယ်နှင့်များစွာသောအမှုအရာပြည့်စုံ။ သူကသစ်သားထဲကအများအပြားသေးငယ်တဲ့ငါးဖမ်းလှေများတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူဟာကျွမ်းကျင်တဲ့လက်သမားကြီးအများအပြားအိမ်များကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူကပင်ဒီဇိုင်းနှင့်ရှည်လျားသောအစဉ်အဆက်ထိုသို့သောအမှုကိုကြား၏မည်သူမဆိုရှေ့မှာမပေါ့အပ် camper ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူကသူ့ဖော့ဆို့င့်ဖောက်သည့်ယင်ကောင်ချည်ထားနှင့်ငါးဖမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့အားလုံးကျွန်တော်တို့ကိုသိုထား၏။ သူကပိုကောင်းသူ၏အသက်တာကိုဖန်ဆင်းသောတီထွင်မှုအဘို့ကြီးစွာသောနျဖိုးထားရှိခဲ့ပါတယ်။ သူဟာစခန်းချနေထိုင်မည့်များအတွက်အသုံးပြုသည်သူ၏ Colman မီးအိမ်နှင့်မီးဖိုမှာအံ့ဩ။ သူကဘဏ်တွေတလျှောက်ငါးဖမ်းဘို့အတော်လေးတိတ်ဆိတ်ခဲ့တဲ့ Silvertrol လျှပ်စစ် trolls မော်တာရှိခဲ့ပါတယ်။ မိမိအသစ်ကိုလူမီနီယံလှေတယောက်သောသူကသူ့ငါးဖမ်းကားတစ်စီး၏ထိပ်ပေါ်တွင်ထိန်သိမ်းကနေတင်ချကိုင်တွယ်ရန်အတွက်လုံလောက်သောအလင်းဖြစ်၏။ သူတဦးတည်းလက်တော်နှင့်တစ်ဦးယင်ကောင်လှံတံ ချ. နှင့်အခြားတစ်ဦးက trolls မော်တာအပြေးသူ့အချိန်အများစုကိုကုန်ဆုံးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိသမုဒ္ဒရာစီးတီး #90 အော်တိုယင်ကောင် reel ဂုဏ်ယူခဲ့ပါတယ်။ သူကမစ္စတာ Coleman ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီနေ့၌အအေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိုရည်ကိုစောငျ့သောကောင်းတစ်ဦးအေးကိုဖန်ဆင်းခံစားရတယ်နှင့်မစ္စတာ Evinrude သယ်နဲ့သူ့လှေပေါ် mount ရန်လွယ်ကူသောအံ့သြဖွယ် 3-မြင်းကောင်ရေ Lightwin လှေမော်တာဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
အခုတော့ကျွန်မရဲ့ 50 ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကို, ငါတက်ကြီးထွားလာခဲ့ကောင်းမွန်သောနေ့ရက်ကိုတန်ဖိုးထားနေပါတယ်။ ငါနေဆဲငါ့ခမည်းတော်နှင့်ငါ့ကလေးတွေနဲ့အတူယင်ကောင်ငါးဖမ်း၏အစဉ်အလာအပေါ်တင်ဆောင်လာသောအချိန်ဖြုန်းနေကြတယ်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည်ပစ္စည်းကိရိယာများပိုကြီး, အသစ်များပိုမိုအဆင့်မြင့်သည်, အားလုံးစျေးကြီးအများစု။ ငါသည်ငါ့အဖိုးမတတ်နိုင်ဘယ်တော့မှနိုင်သောအရာရှိသည်နှင့်ပြုကြဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းခဲ့ပြီးပြီ, ဒါပေမယ့်တစ်နည်းနည်းနဲ့တစ်ခုခုပျောက်နေသည်။ ငါငါ့သမီးနဲ့သားငါးမျှား ယူ. , အခွင့်အလမ်းရှိသည်မဆိုကလေးတွေကဲ့သို့ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လှေကိုမောင်းဖို့ချစ်ကြတယ်။ တစ်နည်းနည်းနဲ့သူတို့ကမြင့်မားသောတန်ခိုးနှင့်အတူတူပင်အတှေ့အကွုံရတဲ့မြင့်မားနည်းပညာ, ယနေ့ငါငါ့အငါးဖမ်းလှေပေါ်တွင်ရှိသည်လေးခုလေဖြတ်အင်ဂျင်ကြသည်မဟုတ်။ ငါ့သားနဲ့ကျွန်မအတူတူကင်းထောက်ရှိကြ၏, ငါသည် Environmental Science သို့များအတွက်တိုင်ပင်တံဆိပ်ကိုပညာရည်ချွန်။ ငါသေးငယ်တဲ့မော်တာ၏လိုအပ်ချက်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ဒါနဲ့ဖို့ကင်းထောက်ယူချင်သောရေကန်တစ်ခုမှာတစ်ဦး 10-မြင်းကောင်ရေန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်။ ငါကင်းထောက်နှင့်အတူလုပ်ဖို့လိုခငျြသောအရာကိုသဘောပေါက်သတ္တုတွင်း၏မိတ်ဆွေတစ်ငါ့ကိုသူကသူတို့ကိုစတင်ရန်ဖို့ကြိုးဆွဲထုတ်ဖို့အသက်ကြီးလွန်းခဲ့ပြောခဲ့သေးငယ်တဲ့မော်တာ၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုပေး၏။ ဤရွေ့ကားမော်တာငါချက်ချင်းကြောင့်ငါသည်ငါ့အဘိုးရှိခြင်းသတိရရုံနဲ့တူကြောင့်နှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျဆင်းသွားနှင့် 1963 ဂျွန်ဆင်3HP က Seahorse သော 1958 Evinrude 5.5 HP က Lightwin ခဲ့ကြသည်။ ငါသည်ဤဂန္မော်တာဖြစ်ကြောင်းသိသည်။ ကျွန်မပတ်ပတ်လည်ထိုင်လျက်ရှိသည်ဟုတဲ့အထိဖမ်းဆီးရမိ 1996 ဂျွန်ဆင် 15 မြင်းကောင်ရေ, ပြုပြင်ကြပြီအဖြစ်လည်းစျေးကြီးဖွင့်ပေးထားနှင့်အတူဤရွေ့ကားမော်တာ, ငါ့ကိုငါအကောင်းတစ်ဦးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလညှိတက်စီမံကိနျးအတှကျလိုအပျတဲ့စိန်ခေါ်မှုအပ်ပေးတော်မူ၏။
"အရာအားလုံးစုဝေးများနှင့်မှန်ကန်စွာချိန်ညှိလျှင်ကြောင့်မော်တာမှကြွလာသည့်အခါထို့နောက်သူကကောင်းကောင်း run ပါလိမ့်မယ်။ " အဲဒီကငါ့အဘိုးကအမြဲပြောတယ်, ငါကောင်းကောင်းမှတ်မိ "က start သို့မဟုတ်ကောင်းစွာ run မပါဘူးဆိုရင်, ထို့နောက်တစ်ဦးကိုသင်ရှာဖွေဖြေရှင်းရန်ရှိသည်ကြောင်းပြဿနာသို့မဟုတ်ညှိတက်ရှိ၏။ " ဤသူသည်ငါ့ကိုဆုံးမသွန်သင်သောအသက်တာ၌များစွာသောအမှန်တရားတွေတစ်ခုဖြစ်သည်။ မီးပွား, လောင်စာဆီနှင့်ချုံ့တဲ့မော်တာပြေးစေရန်လိုအပ်သည်သောသုံးခုအဓိကအရာဖြစ်ကြ၏။
ငါမြော်လင့်ကအသေးစားပြုပြင်သို့မဟုတ်ညှိတက်လိုအလားတူမော်တာနှင့်အတူမည်သူမဆိုများအတွက်အရင်းအမြစ်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုထိုကဲ့သို့သောလမ်း၌ဤ website တွင်ရုပ်ပုံများနှင့်ရှင်းလင်းချက်ပို့စ်တင်နေဖြင့်ဤအမော်တာ၏ညှိတက်မှတ်တမ်းတင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသုံးကြောင်းတိကျသောစိတျအပိုငျးနဲ့သူတို့ရဲ့ catalog နံပါတ်များကိုစာရင်းပြုစုခြင်းနှင့်သင်လိုအပ်အတိအကျသင်သည်အဘယ်သို့ပြောပြလိမ့်မယ်။ ငါသာရိုးရှင်းသောကိရိယာများနှင့်ပြုပြင်လက်စွဲစာအုပ်နှင့်အတူဤအညှိတက်စီမံကိန်းများကိုလုပ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ သင်အမွေဆက်ခံသို့မဟုတ်ဝယ်ယူကြောင်းန်းကျင်ကဤဟောင်း Evinrude သို့မဟုတ်ဂျွန်ဆင်ပဲ့ချိတ်စက်ထဲကတစ်ခုရှိစေခြင်းငှါ။ ဒါဟာသို့မဟုတ် run မပြုစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်ပေမယ့်အခွင့်အလမ်းတွေကိုကပြီးပြည့်စုံညှိတက်နှင့်အတူကောင်းစွာ run ဖို့လုပ်နိုင်ပါတယ်နေကြသည်။ သငျသညျတော်တော်များများသင်က e-ဂလားပင်လယ်အော်မှတဆင့်သို့မဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်အင်တာနက်ကိုတခုတခုအပေါ်မှာဟောင်းများကိုမော်တာများအတွက်လိုအပ်မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရနိုင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ Amazon.com ပေါ်တွင်အစိတ်အပိုင်းများအတော်များများဝယ်နိုင်ဘယ်မှာလင့်များရှိသည်။ အမေဇုံအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့ဒီ site နှင့်အနာဂတ်စီမံကိန်းများအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ဖို့ကူညီပေးသည်ရသောသေးငယ်တဲ့ကော်မရှင်ရ။ သငျသညျဟောင်းပဲ့ချိတ်ရှိပါကသင်တစ်ဦးရေကန်ပေါ်မှာထား up ပြုလုပ်ပစ်ခတ်နှင့် run ဖို့မျှော်လင့်ထားခင်, သငျသညျညှိဖို့ကတက်လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကောင်းညှိတက်မရှိရင်, သင်ကောင်းတစ်ဦး outing ဖျက်ဆီးနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်စိတ်ပျက်ကိုရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအဖြစ်ကောင်းစွာအသစ်အခါကပြုသကဲ့သို့သေးငယ်တဲ့ပဲ့ချိတ်လှေမော်တာပြေးစေရန်အကြောင်းကိုအစိတ်အပိုင်းများအတွက် $ 100 နှင့်အချို့သောဆက်ကပ်အပ်နှံအလုပ်သမားကြာသာ။ ငါသည်ဤမော်တာပေါ်တွင်အစိတ်အပိုင်းများအချို့တို့သည်မော်တာစနစ်တကျပေမယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာသိမ်းဆည်းထားခဲ့ပါတယ်ရင်တောင်အစားထိုးခံရဖို့လိုအပ်မယ်လို့သိလိုက်ရတယ်။ အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများအချို့သည်မူလအစိတ်အပိုင်းများဒီတော့သူတို့ကိုသင့်ရဲ့မော်တာကူညီပေးပါမည်အစားထိုးဖို့ဝေးသာလွန်ဖြစ်ကြသည်။ ငါ၏အလိုဆန္ဒသူတို့ပြပွဲအပိုင်းပိုင်းဖြစ်ကြောင်းအမှတ်ဤမော်တာ restore လုပ်ဖို့, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲကျွန်မနှစ်ပေါင်းများစွာသုံးပြီးပျော်မွေ့နိုင်သောအရာတစ်ခုခုနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်သည်မဟုတ်။ သူတို့ပြပွဲအပိုင်းပိုင်းရှိပါတယ်, ပြီးတော့ရောင်းချဘို့ထိုသူတို့ပူဇော်ရှိရာအမှတ်ဟောင်းများကိုလှေမော်တာတက် fix သူကိုလှည့်ပတ်လူတွေရှိပါတယ်။
ဤမော်တာတစ်လှေကုန်သည်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်မှာ fixed ရမယ့်ကံဇာတာကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ ငါအဟောင်းများကိုမော်တာပြုပြင်တာတွေတန်ဖိုးရှိမဟုတ်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့သညျငါ့ကိုအသစ်တစ်ခုကိုမော်တာရောင်းတွင်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည်နေရာတွေ၏စုံတွဲတစ်တွဲအားဖြင့်ပြောပြသည်ခဲ့ကြရတယ်။ တခြားနေရာတွေမှာသူတို့နှစ်သမီးအရွယ် 10 သို့မဟုတ် 20 ထက်ပိုဖြစ်ကြောင်းမော်တာအပေါ်အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတာသင်ပြောပြလိမ့်မယ်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့အဲဒီမော်တာညှိတက်နှင့်မည်သူမဆိုအချိန်ကိုအတူသည်းခံခြင်းနှင့်အနည်းငယ်မျှသာစက်မှုစွမ်းရည်ရန်လွယ်ကူများမှာတဦးတည်းတက်ညှိများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နည်းနည်းကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူကောင်းစွာလည်ပတ်နေရနိုငျသညျ။ သင်တို့သည်ဤစီမံကိန်းများ၏တဦးတည်းဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ up ပြုလုပ်ပစ်ခတ်ပြီးတာနဲ့သင်ကသင်၏ဟောင်း Evinrude သို့မဟုတ်ဂျွန်ဆင်လှေမော်တာကောင်းစွာ run လုပ်တတ်သည်ဟုသိမှတ်လျက်စိတ်ကျေနပ်မှုမှာများစွာသောသဘောတူညီချက်ရပါလိမ့်မယ်။
ကျေးဇူးပြု ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ သင်သည်သင်၏စီမံကိန်းကိုစတင်ပါမတိုင်မီသင်လိုအပ်သောအရာကိုအကြောင်းကိုဖတ်ပါရန်။